Ny Alaska Airlines dia misidina tsy miato mankany Everett's Paine Field avy amin'ny seranam-piaramanidin'i Silicon Valley
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny Alaska Airlines dia misidina tsy miato mankany Everett's Paine Field avy amin'ny seranam-piaramanidin'i Silicon Valley
Ny Alaska Airlines dia nanangana serivisy tsy an-kiato mankany amin'ny seranam-piaramanidin'i Paine Field-Snohomish County (PAE) any Everett, Washington avy ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Mineta San Jose (SJC). Paine Field no toerana itodiana farany an'i Alaska ary ny serivisy serivisy serivisy vaovao any Etazonia Any avaratry Seattle, Paine Field dia manome safidy ho an'ny mpandeha any Washington Andrefana ho safidy mora sy mora kokoa amin'ny dia. Hahafantatra bebe kokoa momba ny serivisy vaovaon'i Alaska ao amin'ny Paine Field eto.
"Faly aho mandray ny serivisy indroa isan'andro ho an'ny Paine Field, safidy iray hafa ilaina amin'ny seranam-piaramanidina ho an'ireo monina sy miasa amin'ny faritra avaratry Seattle," hoy ny ben'ny tanàna San Jose Sam Liccardo. "Faly aho ny CEO Brad Tilden sy ny ekipany ao amin'ny Alaska Airlines noho ny fampiasam-bola mitohy amin'ny seranam-piaramanidina haingana indrindra any Amerika."
Ny sidina vaovao dia tantanan'i Horizon Air miaraka amin'ny fiaramanidina Embraer 175, izay ahitana efitrano misy kilasy telo, misy kilasy voalohany tsy manam-paharoa, ary kilasy premium miaraka amin'ny cocktails, divay sy labiera ary birao fanampiny ary efitrano fanampiny. Manomboka amin'ny 11 martsa izao ny serivisy indroa isan'andro:
Tonga ny sidina City Pair
AS 2741 San Jose - Everett 10:30 maraina
5:45 hariva 12:40 hariva
7: 55 ora
AS 2742 Everett - San Jose 7:30 maraina
2:00 hariva 9:45 maraina
4: 15 ora
Eo an-toerana ny fotoana. Ny salanisan'ny sidina dia 2 ora. 10 min.
"Andro iray tena manokana sy tsy fahita firy ity fandefasana serivisy tsy an-kijanona voalohany avy any SJC mankany Paine Field, seranam-piara-manidina izay tsy nahita serivisy ara-barotra hatramin'ny taona 1940," hoy ny talen'ny fiaramanidina John Aitken an'ny SJC. “Misaotra ireo mpandeha taminay noho ny fanoloran-tenany tsy tapaka ho an'ny Alaska Airlines sy ny seranam-piaramanidin'i Silicon Valley. Ny serivisy vaovao androany dia ohatra iray hafa amin'ny fifantohan'ny Alaska amin'ny fanatsarana ny traikefa amin'ny dia ho an'ireo izay monina sy miasa ao amin'ny faritra misy anay. ”
Serivisy serivisy vaovao any Paine Field no andrasana hamonjy fotoana sy vola ho an'ireo mpandeha mihoatra ny iray tapitrisa monina ao North Puget Sound. Hahafinaritra azy ireo ny fivezivezena fohy kokoa eo anelanelan'ny Paine Field sy ny tranony sy ny orinasany, manamaivana ny fitohanan'ny fifamoivoizana ary manampy ny fotoana manokana sy ny famokarana.
Ny serivisy Paine Field vaovao dia ampahany amin'ny drafitra fitomboana stratejika any Alaska ao amin'ny SJC, tanàna ifantohan'ny zotram-piaramanidina. Alaska no mpitatitra faharoa lehibe indrindra an'ny SJC izay misy 46 ora tsy an-kiato isan'andro, hatramin'ny fahavaratra 2019, amin'ireo tanàna 20 ireo: Austin, Boise, Burbank, Cabo San Lucas, Dallas-Love Field, faritra Everett / Seattle, Guadalajara, Honolulu-Oahu , Kahului-Maui, Kona-Hawaii, Lihue-Kauai, Los Angeles, Newark, New York-JFK, Orange County / Santa Ana, Portland, Reno, San Diego, Seattle ary Tucson.
Pune hitsena ny hotely faharoa Ritz-Carlton any India amin'ny volana septambra
Aerospace Pact dia mampihena ny sarany amin'ireo orinasa amerikana, manokatra ny fidirana eoropeana amin'ireo tsena amerikana